Tontolo iainana-miaro Ceramic
Microcrystalline Alumina Fitotoana Vary Media
Zirconia microsphere-mitoto vary vakana
Yttria-voahozongozona Zirconia Bead
Ceria Voahozongozona Zirconia Bead
Zirconia Ceramic Roller (ZCR) Zirconia Ceramic Roller (ZCR) dia be ampiharina amin'ny fametrahana mazava tsara ny avo horonan-taratasy fikarakarana milina elektronika sy ny bateria fa tsy alumina tanimanga sy ny firaka-roller-roller vy. Izany no fototry ao amin'ny horonan-taratasy milina. ZCR mitondra tena avo avo hery sy anaovan'ireo-fanoherana fampisehoana amin'ny horonan-taratasy nandritra ny fampiasana milina. Ny hamiratra indray andro ZCR dia mihoatra noho ny in-4-roller vy firaka. Ary fanompoana aina mihoatra noho ny firaka intsony vy-roller. ZCR ihany koa dia azo ampiasaina amin'ny hanorotoro ...
Zirconia Ceramic Roller (ZCR) dia be ampiharina amin'ny fametrahana mazava tsara ny avo horonan-taratasy fikarakarana milina elektronika sy ny bateria fa tsy alumina tanimanga sy ny firaka-roller-roller vy. Izany no fototry ao amin'ny horonan-taratasy milina.
ZCR mitondra tena avo avo hery sy anaovan'ireo-fanoherana fampisehoana amin'ny horonan-taratasy nandritra ny fampiasana milina. Ny hamiratra indray andro ZCR dia mihoatra noho ny in-4-roller vy firaka. Ary fanompoana aina mihoatra noho ny firaka intsony vy-roller.
ZCR ihany koa dia azo ampiasaina amin'ny manorotoro ny lehibe haben'ny tsy ahy vy sy tanimanga fahadiovana avo akora.
fifehezan W.% 94,8% ZrO 2, 5.2% Y 2O 3
Specific Density g / sm 3 ≥6.0
Hamafin'ny (HV) Kg / MG 2 ≥1250
hiondrika Strength MPa 1150
tapaka mikasika ny Fahasarotana MPa.m 1/2 ≥9
Grain Size μm <0,5
lasitike Modules GPA 200
mafana Conductivity W / (Jereo Mk) 3
Fanitarana mafana Coefficient (20-400 ℃) × 10 -6 m / ℃ (20-400 ℃) 9.6
Manaraka: Zirconia tenan'ny Nozzle
Zirconia hafa Ceramic Part
Silicon nitride tanimanga fanafanana takelaka
Zirconia tenan'ny Nozzle